Indlu entle eyenziwe ngamaplanga ezintabeni ze8per
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguLukas
Krásný a úplně nový srub, ktery se nachází na klidném místě, na periférii města Nejdek. Je umístěn pod lesem a nabízí krásný výhled. Užijete si přírody a současně budete mít mnoho příležitostí k výletům v okolí (Karlovy Vary, Loket, Klínovec, atd.).
Sikunika ukuhlala kamnandi kwikhabhathi yethu entsha yelog ekwimizuzu nje eli-15 ukusuka kwidolophu entle yaseKarlovy Vary. Ibekwe malunga nesiqingatha sendlela phakathi kweKarlovy Vary kunye neKlinovec (eyona ntaba iphakamileyo eKrusne hory) kwaye iziimitha ezingama-640 ngaphezu komphakamo wolwandle.
Kwikhabhinethi apho uya kufumana igumbi lokuhlala elidityaniswe nekhitshi kunye nendawo yokutyela. I-sofa kumagumbi okuhlala inika indawo eyaneleyo yokulala abantu ababini. Kwigumbi lokuhlala kukho i-Smart TV enkulu enezitishi ezininzi zasekhaya okanye i-HBO GO. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo. Igumbi lokuhlambela kunye negumbi lobugcisa likwakhona kumgangatho ophantsi. Umgangatho wokuqala unamagumbi amabini aneebhedi ezi-3 zizonke.
Igadi inkulu (ngaphezu kwe-2000m2). Igadi inika i-terrace, i-grill, indawo yomlilo, indawo yokuzonwabisa kunye nemidlalo. Igadi ayisicaba kodwa iyehla kancinci. Phantsi kwendlu yethu kukho umhlaba ongenazindlu kwaye phantse yonke imihla unokubukela amaxhama.
Ukupaka: indawo yeemoto ezininzi phambi kwendlu ngasesitratweni. Iyinxalenye yegadi kodwa ayibiyelwanga.
Ukuthenga: Ivenkile enkulu ekufutshane (iPenny) yimizuzu emi-2 ngemoto okanye imizuzu eli-10 ngokuhamba. Embindini wedolophu (imizuzu eli-10 ngokuhamba) ungafumana iindawo zokutyela ezimbalwa ngokunjalo).
Ukufudumeza: Ukufudumala kunikezelwa ngesifudumezi se-pellet esikhululekile kakhulu ngokudibanisa nomgangatho wokufudumeza (umgangatho ophantsi). Isifudumezisi sikwigumbi elikhulu kodwa sikwadityaniswe namagumbi akumgangatho ongasentla. Ingxowa enye yeepellets ihlala phakathi kweeyure ze-8-24 ngokusekelwe kwisethi yamandla. Iindleko zengxowa enye yi-4 Euro.
55" HDTV ene-I-HBO Max
Umbuki zindwendwe ngu- Lukas